Lifshack: otu esi azụta bras online
Ịbụ nwanyị bụ ezigbo nkà, n'ihi na ezi nwanyị aghaghị ịchachachaa ma zuo okè n'ihe niile. Echefula ihe ndị dị mkpa dị ka ịhọrọ uwe mgbochi. Uwe ejiji ma mara mma na-eme ka nwanyi nwee obi ike ma ghara inwe obi abụọ banyere mmekọahụ na ịma mma ya.
Umu umunwanyi na-acho ihe di mma mgbe nile, ha na-elekwa anya site na nwoke. O bu ihe nwute, obughi nwanyi obula enyerela uzo di iche iche site na okike. Ma enwela obi nkoropụ ma chee banyere ọrụ ndị dọkịta dọkịta plastik, n'ihi na enwere ike idozi nsogbu a ma ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ bra. Amụma ahụ a họọrọ ziri ezi agaghị enye gị mmetụta nke nkasi obi, kama kwenyekwa uru, kpuchie mmejọ.
O yiri ka ịchọta ezi bra abụghị ihe siri ike na nnukwu ụlọ ahịa ndị dị otú a, ma ozugbo ị gara ịzụ ahịa ụlọ ahịa, n'eziokwu, ọ na-egosi na nhọrọ ahụ dị oke oke. Ụlọ ahịa ahụ bụ otu ngwaahịa ahụ: ụdị kachasị maka ụdị ọkọlọtọ. Ya mere, n'ihi na ụmụ nwanyị ndị na-abụghị ihe ndị na-abụghị ụkpụrụ iji họrọ bra bụ n'ezie ihe. Ọ bụghị ịkọwa eziokwu ahụ na ọnụ ahịa ụlọ ahịa na-anọghị n'ịntanetị dị elu karịa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ya mere, ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ahọrọ ịzụ ahịa n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, ihe a ma ama nke Victoria Victoria na-enye dị iche iche uwe. Ndị nnọchiteanya nke ndị ahịa nke H & M na Debeere nwekwara ike iju onye zụrụ ahia na-adọrọ mmasị ụdị.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi họrọ oke kwesịrị ekwesị, ụdị bra, na ihe ndị ọzọ ịchọrọ maka ịzụta egbe, ka ngwaahịa ahụ wee zuo oke ma nwee obi ụtọ maka onye nwe ya. Ịhọrọ na ịzụta ya kwesịrị ịṅa ntị, uwe kwesịrị ịbụ ọ bụghị nanị mma, kama ọ dịkwa mma, dị jụụ, site n'itinye aka na nkwado.
Kedu otu esi achọpụta oke nha?
Site n'ụdị nkwado dị iche iche nke ụdị dị iche iche, agba, akwa, ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ iji chọpụta ngwaahịa ahụ; mgbe mgbe a na-ahọrọ ime ihe na-adọrọ mmasị na imepụta na ịchọ mma n'èzí, na-emegide ihe dị mma.
Tupu ịzụta, jide n'aka na ị ga-eji otu teepu centimeter tụọ. Nke a dị mfe ma dị mfe, ihe ọmụma ahụ a ga-enweta ga-enyere gị aka ịzụta uwe akwa kwesịrị ekwesị. Ya mere, ọ dị mkpa ịmara olu dị n'okpuru ara na olu nke ara na isi ihe ndị na-apụta. Nọmba abụọ a ga - enyere gị aka ịchọta akara nke mejupụtara leta (iko iko) na nọmba (mgbakwunye n'okpuru igbe). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na girth dị 75 cm, na iko iko hà nhata B, mgbe ahụ, nha nke nkwado dị mkpa bụ 75V.
N'okpuru ebe a bụ tebụl, site n'enyemaka ha, ị nwere ike ịchọpụta nha. N'ihe nha nke ntinye gi, gee ntị na teepu nke centimita kwesiri ihe kwesiri ikpa na aru ma ghara ighagharia ebe obula, mgbe ahu ihe ndi a ga-emezi.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ngwaahịa maka ihe dị mma na-enye tebụl ndị yiri ya. Onye na-atụ aro na-adọrọ mmasị na-atụgharị uche "onye nnyemaaka n'ịhọrọ bra" dị na ngalaba nke bras of the shop bonprix. Nke a bụ usoro bara uru na nke bara uru, nke ọ dị mkpa ịbanye naanị mkpụrụokwu abụọ, nke anyị kwuru okwu n'elu ma tinye akara na paragraf dị iche iche. Usoro ihe omume a agaghi enye gi oke kwesiri ya, kamakwa o na-enye ndi mmadu ndi ozo kwesiri ya. Nhọrọ nke linin na bonprix dị nnọọ obosara, ị nwere ike ịchọta uwe dị iche iche: site na nke oge ochie na-akpa àgwà.
Kedu otu esi ahọrọ uwe kwesịrị ekwesị maka uwe?
Akwa uwe kachasị mma agaghị adị mkpa, ma o kwesịrị ịdị mma ma buru ya dị ka okwesighi ike. Zere imepụta uwe ime akwa maka ihe siri ike, nke na-emepụta mmetụta nke enweghị ike ebe ọ na-adịghị mkpa. Maka uwe ndị dị otú ahụ dị mma, uwe akwa na-enweghị ntụpọ dị mma. Ma ọ bụrụ na uwe ahụ na-egbuke egbuke, mgbe ahụ, n'ọgbọ agha gị, ị ga-abụ ihe nkedo nke ọla na akpụkpọ anụ.
Ụdị ụdị nkwado
Push-elu. Site na Bekee, nsụgharị ahụ dịka "bulie, mụbaa." Ọdịdị nke bodice a na-eme ka okpukpu okpukpu ahụ dịkwuo ukwuu site na itinyekwu ya n'ime iko nke silicone ma ọ bụ ụfụfụ. Ntughari na-ewu ewu na ụmụ nwanyị na-enwe obere ụdị ma ọ bụ na-achọ ime ka silhouette dịkwuo ụtọ.
Balkonet . Nnukwu mkpụmkpụ na nke na-adọrọ adọrọ, nke nwere obere calyxes, na-emeghe akpa ahụ. N'akụkụ ala nke iko, balkonet nwere "ọkpụkpụ," ha na-akwado nke ọma ma bulie igbe ahụ. Nke a bodice dị mma maka ndị inyom nwere ụdịdị dị oke mma, mana bra a apụghị ijide ara ara.
Jiri iko dị arọ na-enweghị olulu. Aha ahụ na-ekwu maka onwe ya. N'ọgba a, enweghi ihe ọ bụla e tinyere na nnukwu iko. Ụmụ nwanyị ndị na-enwe afọ ojuju n'ụdị dị iche iche na-ahọrọ ya, ọ dịghịkwa mkpa nkwado na mgbazi ara ha.
Bando. A na-eme ihe nlereanya nke akwa ákwà. A na-enwe ike ịchọta akwa ahụ na bando n'etiti. Nke a bodice ga-adaba ụmụ nwanyị nwere obere ara, tk. O nweghị ọrụ nkwado nke dị mkpa maka ndị inyom nwere ụdị ụfụkwu.
Corbeil. Ọ na-ele anya dị ka ihe atụ nke balkonet, mana o nwere otu ihe dị iche iche: mmechi na-ekpuchi obi ma nwee mmetụta siri ike, nke na-emepụta oghere na-adọrọ adọrọ. Akpa a dị mma n'okpuru uwe na V-olu na akwa neckline. Kwesịrị ekwesị maka nha dị iche iche: site na obere na na-abụghị ọkọlọtọ.
Na akwa neckline. Bra na iko, nke na-adọta nnọọ ala, ọ na-enye gị ohere iyi akwa na neckline. Kwesịrị ekwesị maka obere ara, tk. enyeghị nkwado zuru oke. Nke kachasị mma maka uwe mgbede na nnukwu neckline.
Bralette. Nke a bụ ogwe aka dị nro, nke ejiji ma ọ bụ silk. Ọnụ ọgụgụ nke aka aka hà dị ka uwe ahụ, ya mere, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume imehie ihe. Uwe dị otú ahụ adịghị mkpa ka a zoo ya n'okpuru uwe, ọ nwere ike igosi ya nke ọma na uwe elu ma ọ bụ na-eji ejiji na otu ubu. Bralette na-adọrọ mmasị n'okpuru jaket na n'okpuru uwe dị ka nkọwa nchịkọta nke coquettish. Ihe oyiyi na-eme ka obi dị jụụ na ịhụnanya, ọ bụghịkwa ihe ọjọọ.
Ihe eji eme ihe na-agbasa na akwa, na stylists kwadoro ịzụta otu uwe ime. Nke a abụghị naanị mma, kama ọ na-enyekwa nwanyị ahụ ntụkwasị obi dị ukwuu na ịma mma ya na inwe mmekọahụ. Ngwongwo ejiji na-adịkwa mfe ịzụta online. Dịka ọmụmaatụ, na ụlọ ahịa which.ru e nwere ụlọ ọrụ na-adọrọ mmasị, ma nke ọma ma maka ụbọchị ọ bụla, na ịghọ aghụghọ maka oge pụrụ iche. Ụlọ ahịa dị n'ịntanetị lamoda.ru na-enwe mmasị na uwe akwa, gụnyere ụlọ ndị mara mma. Ụfọdụ ụdị na-enye ohere magburu onwe ya iji kpọkọta onwe gị ákwà. Dịka ọmụmaatụ, saịtị bonprix na ụdị ụfọdụ ga-enye ndị na-emepụta ihe dị mma iji mee ka ha mara mma. Lezienụ anya na ire ere: ụfọdụ ụdị aka na ihe eji eme ihe maka ndị dị otú ahụ bụ ezigbo ego.
Uwe ejiji na uwe ime ala abughi ihe na-adighi nma, ma ihe di mkpa n'ime uwe umu nwanyi. Ezigbo ọkwá adịghị eme nke ukwuu, ya mere, nye onwe gị ntaramahụhụ nta a ma kwe ka ịzụ ahịa ịntanetị bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma dị irè.
Lilac uwe - akwa ejiji nke nwayọọ na-egbuke egbuke shades
Nwa nwanyi na-eme mgbanwe ntaneti
Pants na otu na-agbanwe band na ala
Akpụcha akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-enweghị ikiri ụkwụ
Ngwongwo mechiri emechi
Egwuregwu Knee Pads
Uwe ejiji maka ọfịs
Ala ala Alaska
Uwe ala uwe - nhọrọ nke ihe oyiyi kachasị mma
Uwe Oji Umu Umu Umu Umu Ochie
Ekpere maka mmebi iwu
Kedu ka esi mee ka ndị sneakers ọcha dị ọcha?
Alec Baldwin kwetara na n'oge ọ bụ nwata o jiri ọgwụ ọjọọ eme ihe
Nri mmanụ aṅụ
Rotavirus - ọgwụgwọ
Ọhụụ ọhụrụ na-enwe mmekọahụ
Ihe ịma aka nke mmụọ na-eme n'ụlọ
Esi esi esi nri Pizza n'ụlọ?
Nwee ihe na-eme ka ọ bụrụ otu ihe na-eme ka ị na-ahụ ihe
Antstrusy na akwarium - mmeputakwa
Chọpụta nke mbụ: 40 ihe na-akpali mmasị banyere nde mmadụ
Pants na ode
Mbadamba ụda site na mkpọtụ na isi
Nri nri nri nri
Cristiano Ronaldo ga - abụ nna nke ụmụ asaa
Kedu ndị iko gbara gburugburu?
Kedu ihe talent nwata ahụ?
Akpa n'okpuru anya nwa
Kedu ka esi eme ka enwekwuo ihe na-enweghị mbadamba nkume?
Chocolate glaze nke koko
Kedu ihe bụ eriri, site na ihe e mere - ntụziaka sitere na oatmeal